Ihe ị ga-ahụ na Portocolom | Akụkọ njem
Mariela Carril | | España, Ihe ị ga-ahụ
En Mallorca e nwere obodo nke aha ya Portocolom, obodo ochie na-akụ azụ, na-eme njem nlegharị anya, nke na-adabere n'ọnụ mmiri mara mma ma bụrụ nnukwu ebe njem. Anyị ga-agafe oge oyi, anyị ga-agafe ọrịa na-efe efe na ebe ndị dị otú a ga-anọ na-anabata anyị.
Taa, na Actualidad Viajes, ihe ị ga-ahụ na Portocolom.
2 Ihe ị ga-ahụ na Portcolom
Port nke nduruNke ahụ ga-abụ aha ahụ sitere na Latin na n'ezie nke ndị Rom gaara enye ya mgbe ha rutere n'ógbè ahụ ma nwee ekele maka ọnụ ọgụgụ nduru ndị e nwere ma ka dị taa. Nsụgharị ọzọ na-ekwu na aha ya bụ Christopher Columbus, n'ihi na ọ bụ ebe a mụrụ ya.
E mepụtara ọdụ ụgbọ mmiri azụmahịa na Middle AgesMana enwere ọtụtụ ndị na-apụnara mmadụ ihe n'ihi ya, ọnụ ọgụgụ kwụsiri ike bụ ogologo oge na-abịa. Ugbua na narị afọ nke iri na itoolu obodo malitere na-eto eto na obodo oru ngo, ọ bụ ezie na-ekwusi ike nke njem nlegharị anya nke a ga-abata n'afọ 60.
Site n'aka ndị njem nlegharị anya sitere na ụlọ ọrụ a na-enweghị anwụrụ ọkụ na taa ọtụtụ ndị mmadụ na-arụ ọrụ na ngalaba a. Portocolom ọ dị kilomita iri na abụọ n’ebe ugwu Cala d’Or Ya mere, ọ bụrụ na ịchọrọ ịnọgide na-ekpori ndụ anyanwụ, osimiri na oké osimiri, nke a bụ ebe dị mma.
Ihe ị ga-ahụ na Portcolom
Njem anyị ga-amalite n'ime mpaghara kacha ochie, nke a maara dị ka Es Riuetó, na obi na Ogige Sant Jaume. Gburugburu square a bụ Nne nke Chukwu Church, ngwụcha narị afọ nke iri na itoolu na ụdị neo-Gothic. The square bụkwa ebe nzụkọ n'ihi ya, e nwere nnukwu ebe na-aṅụ ihe, Sa Covta dets Ases, na a mara mma teres si ebe ị pụrụ ịhụ warara n'okporo ámá na-amalite site square.
Mgbe ahụ ee, ị ga-aga ije ije ma see foto, kwụsị iji ghọta ụlọ, nkuku, nkuku. Enwere ụlọ ndị nwere ihe mkpuchi mara mma, bougainvillea, na okporo ụzọ dị warara. Ị ga-ahụ igwe kwụ otu ebe na-eche onye nwe ya ma na ntụgharị ọ bụla ị ga-agbaba n'oké osimiri. Ọtụtụ ụlọ nwere ụgbọ mmiri ha na-agbanye ozugbo na ọdụ ụgbọ mmiri, yabụ ị gaghị echefu foto nke ụgbọ mmiri ndị a na-ahụkarị, okwu.
Mgbe mpaghara ochie ị ga-apụ apụ gagharịa n'akụkụ ọnụ mmiri, ọ dịghị ọsọ ọsọ. Na mgbakwunye na ụgbọ mmiri ọdịnala enwere ụgbọ mmiri catamaran na ụgbọ mmiri dị na ya Oge ezumike, ọdụ ụgbọ mmiri, obere ma na-arụsi ọrụ ike mgbe niile, karịsịa n'oge okpomọkụ. E nwekwara ndị ụlọ oriri na ọṅụṅụ ka ị nụ ụtọ nri Mediterranean na ịkụ azụ kwa ụbọchị.
Enwere ọtụtụ nhọrọ: Ụlọ oriri na ọṅụṅụ HPC na paellas ha, azụ, shellfish na salads nke kacha nta ha bụ dị mfe. Ha niile jere ozi na tebụl mara mma na mbara ala a na-achọsi ike. Na Lotja bụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ ọzọ enwere ike, nke nwere vibe ọgbara ọhụrụ, nke nri ya na-elekwasịkwa anya na azụ. Nhọrọ ọzọ bụ Columbus.
Obere dị iche na mpaghara ọdụ ụgbọ mmiri bụ ụlọ ahịa, ma ihe ncheta na ejiji, yabụ ị nwere ike ịzụ ahịa tupu ma ọ bụ mgbe nri. Ma olee ihe ọzọ a ga-eme n'obere obodo a mara mma?
Nso Felanitx bụ Ụlọ nsọ nke Sant Salvador. Enwere ụzọ mara mma nke ukwuu, nke na-efegharị n'ugwu ahụ ruo n'elu Puig Sant Salvador kedu ihe ọ bụ ọnụ ọgụgụ kachasị elu nke ebe ahụ. N'elu bụ nnukwu obe nkume na ihe oyiyi Jizọs. Ọ bụ njem njem njem na agbanyeghị n'oge ndị mọnk anaghị ebi ebe a, ebe ahụ na-enye ndị bịara ileta ebe obibi.
Ebe a na-ewu ewu n'ọgba ya, n'etiti ebe nkiri kacha mma na Mallorca. Enwere ọgba abụọ nke enwere ike iji ụgbọ mmiri ma ọ bụ jiri ụkwụ nyochaa ya, Ọgba Ham na Drac's Cave., ma ọ bụrụ na-amasị gị igwu mmiri ị nwere ike iru okpuru mmiri nke dị n'ụsọ oké osimiri.
Na Portocolom ihe niile na-agbagharị gburugburu oké osimiri otú ahụ enwere ọtụtụ ọrụ mmiri. Ọ bụrụ na ịga n'isi, enwere ụlọ akwụkwọ ịkwọ ụgbọ mmiri, Escola Naùtica s'Algar, ị nwekwara ike. nwee obi ụtọ n'akụkụ osimiri ya, gaa n'ụgbọ mmiri ma ọ bụ na-atụgharị uche ozugbo n'oké osimiri na sunbathe si n'akụkụ osimiri. Ewubela ọnụ mmiri niile pontoon, ọ bụghị nnukwu nnukwu, mana nke ahụ na-enyere aka guzobe obere osimiri ebe a na ebe ahụ.
Osimiri kacha mma dị n'ihu. Dị ka ihe atụ, na 10 nkeji bụ Cala Marsal, nke kacha ewu ewu na niile. Mmiri ya na-egbuke egbuke bụ turquoise ma ị nwere ike ịhụ ha nke ọma site n'echiche ya. Parasols na hammocks na-agbazite na ihu ọma na e nwere osimiri mmanya igbu agụụ.
Cala Brafi A na-ezobe ya na njedebe nke ụzọ nkume nke osisi gbara gburugburu. Ọ na-agbada ruo mgbe ọ rutere n'ebe ájá, obere na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nwa agbọghọ na-amaghị nwoke, pụrụ iche maka ndị na-eme ya nudism ma ọ bụ naturism. Ị nwekwara ike iji ụgbọ mmiri rute, goro n'ọdụ ụgbọ mmiri Portocolom, n'otu ụlọ ọrụ ebe ị na-akwụ ụgwọ njem nlegharị anya mmiri ma ọ bụ egwuregwu mmiri ndị ọzọ.
N'akụkụ nke ọzọ e nwekwara coves na-adịghị anya, ókè-ala n'ọnụ mmiri gafere ochie ebe bụ S'Arenal, osimiri zuru oke na ọbụna nwere ịsa ahụ, na ee, ebe ahụ ka ọ dị mma Ụlọ ọkụ Portocolom wuru na 1860, nke nwere oji na eriri ọcha.
Ọ bụrụ na-amasị gị ịga ije mgbe ahụ ndụmọdụ bụ ka ị gafee ebe obibi dị nso na Hotel Vistamar wee chọta ụzọ dị warara nke na-amalite n'etiti ụlọ abụọ. Ụzọ a na-agwụ n'echiche pụrụ iche dị ka ọ bụ ọgba ọgbara ọhụrụ nwere ngwaahịa arch nke nkwonkwo oke osimiri na ifufe.
Ọ bụrụ na-amasị gị golf e nwere Val d'Or Golf, na ụzọ S'Horta, ma ọ bụrụ na ị dị nnọọ chọrọ iri nri na a mara mma ụlọ oriri na ọṅụṅụ gbara gburugburu golf ọmụmụ, ọ na-arụ ọrụ na max. Na nso Portocolom bụ Pla na Llevant, mpaghara na-atọ ụtọ onye na-eto mmanya nke nwere ike gafere. Cheta na Mallorca bụ paradaịs nwere ihe oriri iri asaa na-eme ka mmanya na-amị mkpụrụ na mkpụrụ vaịn. Ụfọdụ mmanya ndị a emeriela ihe nrite mba ụwa, yabụ ị nwere ike tinye ụtọ ụtọ na ịzụrụ ole na ole.
Dị ka ọ bụ njem nlegharị anya, n'oge okpomọkụ, a na-enwekarị ya mmemme omenala na egwuregwu. N'ezie, ha na-eme n'ime afọ ma karịsịa n'oge okpomọkụ. Dịka ọmụmaatụ, enwere a triathlon amara nke ọma n’ọnwa Eprel, n’ọnwa Jun enwere a ememme gastronomic na na June e nwere a ememe nkume.
Portocolom dị obere ka ọ na-akpọkwa gị ka ị pụọ na gburugburu. Campos, dịka ọmụmaatụ, dị mma ụbọchị njem, otu ihe Cala d'Or, Cala Murada ma ọ bụ obodo Felanitx n'onwe ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » España » Ihe ị ga-ahụ na Portocolom
Lavender ubi na France